ရှိပါတယ်, ဝီကီပီးဒီးယားအရသိရသည်, ဖြတ်ခြင်းနှင့်အခြောက်ဖြစ်ပါတယ် မြက်ပင်, ကျောက်စိမ်း, ပဲမျိုးစုံသို့မဟုတ်ကြီးမားသောပတ်ပတ်လည် Bale အတွက်အခြား herbaceous အပင်. ၎င်းကိုတိရိစ္ဆာန်အစာအဖြစ်မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်, အထူးသဖြင့်ကျွဲနွားများအတွက်, မြင်းများ, ဆိတ်များ, သိုး, စသည်တို့.
တကယ်တော့, မြက်ပင်ကိုအစာတောင့်စက်ဖြင့်တောင့်ဖြစ်စေနိုင်သည်. ၎င်းသည်တိရိစ္ဆာန်များအားအာဟာရမျှတမှုရှိစေရန်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများရောနှောခြင်းဖြင့်ထူးခြားသောပုံသဏ္pာန်လုံးလေးများအဖြစ်မြက်ပင်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်.
ဟေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်တွေ့မြင်ရသောဇီဝလောင်စာတစ်မျိုးဖြစ်သည်, မြက်ပင်များပေါက်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့သည်မမွေးတတ်. ရလဒ်အနေဖြင့်, သူတို့ကအစာတောင့်လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး. သို့သော်, မိသားစုအများစုသည်ဆောင်းတွင်းသို့မဟုတ်ချက်ပြုတ်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏နေအိမ်များကိုအပူပေးရန်လောင်စာလိုအပ်သည်. ဒီကိစ္စမှာ, လောင်စာဆီကုန်ကျမှုကိုလျှော့ချရာတွင်မြက်ပင်လုံးသည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်!
ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, သငျသညျအပေါများပစ္စည်းများရရှိပြီသေချာပါစေ. ထို့နောက်အစာတောင့်အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကုန်ကြမ်းများကိုရရှိရန်အစာကြိတ်ခွဲရန်လိုအပ်သည် (10mm ထက်တိုတောင်းအရှည်). ထို့နောက်အမှုန်လေးများကိုသံတူစက်တစ်မျိုးဖြင့်အမှုန့်အဖြစ်နှိပ်စက်သင့်သည် (အချင်း 3mm ထက်လျော့နည်းသည်). နောက်ဆုံးတော့, မြက်ပင်၏အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်စက်ခြောက်သွေ့ရန်လိုအပ်သည် 15%. ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြီးနောက်, ပစ္စည်းမြက်ပင်လုံးလေးပြုလုပ်သူများအတွက်လုံးဝရရှိနိုင်ပါသည်. မြက်ပင်ထဲသို့အစာကျွေးပါ လုံးလေးများထုတ်လုပ်သူ, နှင့်ပါဝါသိပ်သည်းဆလုံးလေးများသို့ချုံ့လိမ့်မည်. ဒါကအဆုံးမဟုတ်ပါ! အတောင့်ထုတ်လုပ်သူမှထွက်လာသောလုံးလေးများသည်အလွန်ပူပြင်းသည် (အကြောင်း 85 ဒီဂရီ). သင်ကလုံးလေးများကိုအအေးခံရန်အအေးခံစက်ကိုသုံးသင့်သည် 35 ဒီဂရီ. အအေးပြီးနောက်, လုံးလေးများသည်ထုပ်ပိုးစက်နှင့်အတူထုပ်ပိုးရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းတို့သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာသိုလှောင်ထားနိုင်သည်.
Hay pellet သည်ထုတ်လုပ်သည့် အချိန်မှစ၍ အစိမ်းရောင်ရှိသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် 90% ကျောက်မီးသွေးကဲ့သို့ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာထက်လျော့နည်းဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့, နှင့် 10 အဆိုပါ EPA ထုတ်လွှတ်န့်သတ်ချက်အောက်မှာကြိမ်.
Hay pellets သည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားသောစွမ်းအင်သွင်းအားစုမှအချိုးအစားရှိသည် 20:1, သစ်သားရှိနေစဉ် 10:1, နှင့်ဇီဝဒီဇယ်ရှိပါတယ် 5:1.
မြက်ပင်တစ်ပေါင်နီးပါးထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် 8,000 BTUs, အရာသစ်မာနီးပါးညီမျှသည်, နှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းအတွက်ကျောက်မီးသွေးထုတ်လွှတ်သောအပူမှပင်အနီးကပ်. ထို့ကြောင့်၎င်းသည်စိတ်ကူးယဉ်အပူအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်.
လောလောဆယ်, မြက်ပင်လုံးလေးများပြုလုပ်ခြင်းသည်အလားအလာကောင်းသည့်စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်သည်, မသာသောကြောင့်, ကုန်ကြမ်းရယူနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်၏, အိမ်အပူပေးရန်အတွက်တောင့်တောင့်များကိုမီးရှို့ခြင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်၏ထက်ဝက်ကိုအံ့သြလောက်အောင်သက်သာစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်.
မြက်ခင်းပြင်ကြိတ်စက်တွင်ပြုလုပ်သောမြက်ပင်များ၌ယုန်နှင့်မြင်းများအပါအ ၀ င်တိရစ္ဆာန်ကြီးထွားရန်လိုအပ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်. တောင့်တင်းသောပုံသဏ္fာန်သည်ဆူညံနေသောတိရိစ္ဆာန်များ၏အာဟာရမညီမျှမှုကိုလည်းရှောင်ရှားသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, လုံးလေးများကိုသိုလှောင်ရန်လွယ်ကူသည်, တိရိစ္ဆာန်များသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအာဟာရပြည့်ဝသောမြက်ပင်များကိုစားနိုင်သည်.